Fitaovana fametrahana kitendry varotra fananganana kitendry sy mpamatsy - Factory China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Hardware Tools > Other Tools > Kitendry Set-basy
Product Introduction of Box Set Tool Set Multi
Ity fitaovana fitaovana tanana ity dia mety ho an'ny hazo, metaly, asa tanana, famolavolana, fanangonana, fivoriana, biraon'ny trano ary trano fanamboarana fiara. Ahitana fitaovana ilaina ho an'ny ankamaroan'ny fanamboarana kely manodidina ny trano izany. Ny fitaovana dia voatahiry tsara ao anatin'ny tranga maharitra izay mitazona azy ireo ho azo antoka, madio, voalamina ary mora hita.
Product Parameter amin'ny Kitendry Set-bavaka Multi Mechanical
Blackand orange oror araka ny filàn'ny mpanjifa.
Chrome plated, Polishing
Fitaovana famerenana ao an-trano
Kitapo misy boaty anatiny, boaty plastika na araka ny zavatra takinao.
Ny halehibe, ny lokony, ny endriny dia misy.
Karazan-tsakafo sy fampiharana ny Kitendry Set-bary
1. Maharitra ela be ny faharetan'ny fiainana
2. Tsara kalitao
3. Mahay mandanjalanja
4. Fiarovana ambony
5. Toe-pitombo avo lenta ambony
6. Fanaraha-maso 100% QC alohan'ny entana
Product usage:Fanodinana fitaovana famatsiana trano sy sehatra hafa.
Product Details momba ny kitapo kitapo mivalona
Packaging Details:Kitapo misy boaty anatiny, boaty plastika na araka ny zavatra takinao.
Hot Tags: Fitaovana fametrahana fitaovana marika, China, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, Made in China, Wholesale, Buy, Customized, An-tsompitra, Mponina, Price, Vidy, Teny fohy, High Quality
Aluminium Fitaovana Aluminium High QualityToolset Wrench Socket Ratchet Case Box BoxFitaovam-pitaterana kitapo fanao mahazatra